Sambatra izay haratsiana
SAMBATRA IZAY HARATSINA
"Sambatra hianareo raha haratsin 'ny olona sy enjehiny ary asiany izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo noho ny Amiko." Mat. 5:11.
Tsy mbola nisy olombelona ka noharatsiana fatratra mihoatra ny Zanak'Andriamanitra. Natao ho fihomehezana sy nesoina Izy noho ny fankatoavany tsy azo nohozongozonina ireo fitsipiky ny lalàna masin'Andriamanitra. Tsy nisy antony mazava nankahalan'izy ireo Azy. Kanefa Izy dia tony mandrakariva teo anoloan'ireo fahavalony no sady nanambara fa ny fanakianana dia isan'ny lovan'ny Kristianina. Nanoro hevitra ireo mpanara-dia Azy koa Izy ny amin'ny fiatrehana ireo zana-tsipikan'ny fankahalana sady nampahery azy mba tsy hilofika eo anatrehan'ny fanenjehana.
Na dia manimba ny laza aza ny fanaratsiana dia tsy afaka mandoto ny toetra. Toy izany ny fanarahana an'Andriamanitra. Koa rehefa tsy mieritreritra hanota isika, dia tsy misy hery, na an'olombelona na an'i Satana, afaka hitondra loto eo amin'ny fanahy. Ny fo izay miorina eo amin'Andriamanitra dia tsy miova amin'ny oran'ny fitsapana mafy indrindra sy ny toe-javatra mampamoy fo indrindra fa toy ny amin'ny androm-pifaliana, sy ny maha-eo aminy ny fahazavana sy ny fankasitrahan'Andriamanitra. Ny teniny sy ny hery manosika azy ary ny zavatra rehetra ataony dia mety hodisoina sy tsy aseho araka ny tena izy, kanefa tsy ahoany izany, satria manana tombony lehibe hoheverina izy. Tahaka an'i Mosesy izy, miaritra "mahita ny tsy hita." (...)
Efa fantatr'i Kristy avokoa ny zavatra rehetra izay tsy takatra ary disoin'ny olona. Azon'ny zanany atao ny miandry amim-paharetana sy amim-pahatokiana, na manao ahoana fanaratsiana sy fanaovana tsinontsinona; satria tsy misy miafina izay tsy hiseho, ary ireo izay manome voninahitra an'Andriamanitra dia homeny voninahitra eo anatrehan'ny olona sy ny anjely. [...]
"Lehibe ny valim-pitiany any an-danitra" ho an'ireo izay vavolombelon'i Kristy ao anatin'ny fanenjehana sy fanaratsiana. [...] — TFMB, 57.